फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुने, ओली कि मोदी कसले उदघाटन गर्लान् ? – Medianp
फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुने, ओली कि मोदी कसले उदघाटन गर्लान् ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष ०५, २०७५१२:३४0
काठमाडौं, ५ पुस । आगामी फागुनदेखि जनकपुर–जयनगरसम्म रेल सञ्चालन हुने भएको छ । अत्याधुनिक प्रविधि र उच्च गतिको चिनियाँ रेलको चर्चा भइरहँदा नेपालमा सुरुमा भने भारतबाट आधुनिक रेल भित्रिने भएको छ ।
जयनगरबाट जनकपुरसम्म ३४ किलोमिटर रेलमार्गमा नयाँ प्रविधिको रेल गुड्ने भएको हो । यो रेल सञ्चालनपछि नेपाल र भारतका व्यापारी एवं तीर्थयात्री लाभान्वित हुने भएका छन् ।
जनकपुर–जयनगर रुटमा बिछ्याइएको लिकमा ठूलो आकारका रेल (ब्रोगगेज) सञ्चालन हुन सक्छ । यो रुटमा रेल सञ्चालन हुन थालेपछि बढी सामान ढुवानी गर्न सकिने छ भने धेरै यात्रुले पनि सेवा पाउन सक्छन् ।
जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा हजारौंको संख्यामा भारतीय तीर्थयात्री आउने भएका कारण नयाँ रेलले यातायात सेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । वस्तु आयातका लागि पनि यो रेल उपयोग हुनेछ । नेपालले कनेक्टिभिटीमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा जनकपुर–जयनगर रेल सेवाको पुनः सञ्चालनले नयाँ आशा जगाउन सक्छ ।
जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल नेपालको आफ्नै हो । रेलको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय सहयोग पनि रहेको छ । रेलको इञ्जिनदेखि डिब्बाहरुको मुख्य खर्च नेपाल सरकारले गरेको छ । ब्रोडगेज रेल चलाउने प्राविधिक नेपालमा नभएका कारण केही वर्ष विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी छ ।
जयनगर र जनकपुरसम्म अहिले धुलाम्मे सडक छ । सो सडकमा मानिसहरु दैनिक उपभोग्य सामान ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्छन् । भारतमा अंग्रेजहरुले शासन गर्दा तराईको काठ लैजान सन् १९३७ मा अढाई फुटे न्यारोबडी रेलका लागि लिक बिछ्याइएको थियो । सो रेल सन् २०१४ सम्म जीर्णअवस्थामा चल्यो । अहिले बन्द अवस्थामा छ ।
जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा लिक बिछ्याइसकिए पनि अन्य पूर्वाधारका काम भइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा स्टेसन, प्रतीक्षालयलगायतको निर्माणको काम भइरहेको छ । रेलमार्गको उदघाटन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली कसले उदघाटन गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
करीना कपूर र सैफ अली खानको छोराको आज जन्मदिन,यस्तो छ मनाउने तयारी (तस्विरसहित)
तेलको कारण धनि रहेको साउदी अरबले कहाँबाट ल्याउँछ पानी ?